7 Nzira dzeKugonesa Yako Ekushambadzira Shanduko Yekutendeuka Yekushandisa | Martech Zone
Vatengesi vakawandisa vane hanya zvakanyanya nekuwedzera kwekuwanda kwenzvimbo dzavo panzvimbo pekushandura traffic yavanayo. Vashanyi vari kusvika kune yako saiti zuva rega rega. Vanoziva zvigadzirwa zvako, vane bhajeti, uye vakagadzirira kutenga… asi hausi kuvanyengerera nechipo chavanoda kushandura.
Muchirongwa ichi, Brian Downard weEliv8 inoratidza iwe nhanho nhanho maitiro ekuvaka otomatiki ekutengesa fanera iwe yaunogona kushandisa kuwedzera kukura kwekukwira kwebhizinesi rako uchishandisa yakapusa 7-nhanho fomula.
Chigadzirwa / Musika Kukodzera - Ita shuwa kuti chigadzirwa chauri kushambadzira chinokwana nevateereri vavari kukwezva.
Sarudza Wako Traffic Source - Ziva kwayakanakisa sosi yemotokari uye kutyaira yakawanda traffic kubva kune iwo manyuko.
Tungamira Magnetti - Ipa chipo chisingadzoreke chaunogona kupa kumutengi wako maHARA muchichinjana neruzivo rwavo.
Rwendo waya - Govera isinga gadzirisike, yakanyanya yakaderera-tikiti kupihwa (kazhinji pakati pe $ 1 ne $ 20) iyo inoshandiswa kushandura zvinotungamira kuva vatengi.
Chinokosha Chinopa - Zvino zvawave nekutendeuka, kwira uye upe Core Chigadzirwa kana Sevhisi.
Profit Maximizer - ipa tutira iwo mapakeji akakwirira uye akaderera emumicheto zvinhu pamwe chete.
Dzorerai Nzira - unza vatengi vasingatengeri zvakare mune yako fanera nekumisikidza zvine hungwaru zvekubata navo padandemutande.
Tags: Brian Downardkutendeuka optimizationchikuru chinopaELIV8wedzera kutendeukalead magnetkushambadza kwakakodzeramarketing marketingchigadzirwa chakakodzerakushambadzira kwechigadzirwaprofit maximizerdzoka nziratraffic zvinyorwawaya yerwendo